Daabacaadda PDF - Androidsis | Androidsis
PDF waa mid ka mid ah qaababka aan sida ugu badan u qabanno maalinteenna maalin. Waxaan sidoo kale u fureynaa feylasha qaabkan si joogto ah iyadoo la adeegsanayo taleefankeena Android. Haddii aad rabto inaad awood u yeelato inaad shaqeyso ama aad tafatirto mid ka mid ah dukumiintiyadan, waxaad u baahan tahay tifaftire wanaagsan oo PDF ah. Qeybtaan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah barnaamijyadan.
Haddii aad raadineyso tifaftire PDF ah taleefankaaga Android, waxaad ka heli kartaa kuwa ugu fiican qaybtaan shabakadda. Sidoo kale habka aan ugu adeegsan karno PDF tafatirka taleefankeena Android, si aan ugu shaqeyno habka ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'PDF' ee casriga ah. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato, waa inaad la tashataa qaybtaan.
Wax ka beddel faylashaada PDF-ga ah khadka tooska ah oo aan loo baahnayn codsiyo
Waxaa jira codsiyo badan oo naga caawiya inaan wax ka bedelno PDF, inkasta oo ay suurtagal tahay in la sameeyo xilligan iyada oo aan ...
Sida looga saxeexo dukumiintiyada Android-kaaga
by Francisco Ruiz samee 3 sano .
Waxaan ku laabaneynaa cashar fiidiyow ah oo wax ku ool ah oo ah waxa ugu macquulsan ee aad qiyaasi karto, waan hubaa ...
Ku dhowaad maalin kasta waxaan la kulannaa faylal qaab PDF ah. Waa mid ka mid ah qaababka ugu isticmaalka badan ee ...
Google Drive wuxuu hada ka faallayn karaa dukumiintiyada lagu abuuray Office, PDF iyo sawirada iyadoon la badalin
Adeegga keydinta daruuraha ee Google, Google Drive, wuxuu noqday bedel aad u fiican oo lagu ...
Qaabka PDF wuxuu ku fiican yahay akhrinta dukumiintiyada maadaama uu yahay iftiin, aad u raaxo badan oo fudud isha iyadoo aan ...
Sida Loogu Beddelo PDF-ka JPG ama PNG Si Fudud
Tilmaamaha soo socda ee fiidiyoowga ah ee fiidiyowga ah ee 'Android' waxaan kugula talin doonaa oo ku bari doonaa waxa aniga ii ah ...
Waxaan ka helnay codsiyo badan kuwa isticmaala ilaa Androidsis, adoo adeegsanaya faallooyinka boggaga ama shabakadaha kala duwan ...
Sida loogu badalo dhamaan noocyada dukumiintiyada PDF
Mid ka mid ah waxyaabaha aadan weydiisan inta badan farriimaha ku saabsan shabakadaha bulshada ee kala duwan iyo adiga ...
Maanta waxaan rabaa inaan soo bandhigo qayb cusub oo ku saabsan Androidsis, oo ah horudhac qaabkiisa ah iyo inaad kaliya awoodi doontid inaad hesho ...
Adobe wuxuu kuugu qaadaa PDF-kaaga daruurta adeega cusub ee Adobe Document Cloud
Daruuruhu wuxuu noqonayaa meesha loogu talagalay dhammaan noocyada feylasha si loo kaydiyo loona ...
Cusbooneysiinta Dropbox, raadinta dukumiintiga cusub iyo akhristaha PDF
by Alexis Martinez samee 7 sano .
Codsiga adeegga faylka ee daruuraha, Dropbox, wuxuu helayaa casriyeyn muujinaysa akhriste dukumiinti cusub ...